मेरो माइक्रोफाइनान्सको नाफामा छलाङ, प्रतिसेयर आम्दानी कति ?
प्रकाशित : 8:59 am, सोमबार, साउन १८, २०७८
काठमाडौं । मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुुवित्त वित्तीय संस्थाको खुद नाफा साढे दुई गुणाले बढेको छ । लघुवित्तले सोमबार सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८को चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार ४४ करोड ७२ लाख ३९ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ ।
यो अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलानामा १४५.५१ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्षको चैथो त्रैमाससम्म लघुवित्तले १८ करोड २१ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो ।
लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी र प्रोभिजन गरेको रकम राइटब्याक हुँदा खुद मुनाफामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो । समीक्षा अवधिमा लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी ७२.४६ प्रतिशतले बढेर ९० करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, समीक्षा अवधिमा लघुवित्तले ११ करोड ५१ लाख रुपैयाँ राइटब्याक गरेको छ ।
समीक्षा अवधिमा लघुवित्तले २ अर्ब ४१ करोड निक्षेप संकलन र १० अर्ब ५ करोड सापटी लिइ कुल १३ अर्ब ६४ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । हाल १ अर्ब चुक्ता पूँजी रहेको लघुवित्तको जगेडा कोषमा ६३ करोड १२ संचित रहेको छ ।
समीक्षा अवधिमा लघुवित्तको प्रतिसेयर आम्दानी साढे दुई गुणाले बढेर १८.२२ रुपैयाँबाट ४४.७२ रुपैयाँ पुगेको छ । लघुवित्तको खराब कर्जा भने ३.६५ प्रतिशतबाट बढेर ३.७८ प्रतिशत पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा लघुवित्तको प्रतिसेयर नेटवर्थ १६३.१२ रुपैयाँ, मूल्य आम्दानी अनुपात ३४.५७ प्रतिशत रहेको छ ।
« मैलुङ खोलाको आइपीओमा ३५ गुणा बढी आवेदन, कति जनाले भरे ?
मध्य भोटेकोशीको आइपीओमा आवेदन दिने समय थप »